Wikipedia:Why create an account? - ဝီကီပီးဒီးယား
Wikipedia:Why create an account?
အကူအညီ ရေးသားပြုပြင်ခြင်း အသုံးပြုခြင်း ရေးထုံး လမ်းစဉ်
လမ်းစဉ်၊ အသင်းဝင် လုပ်ခြင်း၊ စတင်ရေးသားခြင်း၊ ဘယ်လိုရေး၊ စနစ်တကျ ငြင်းဆိုခြင်းများ၊ မူပိုင်ခွင့်
မြန်မာဝီကီကို ဖတ်ရန် Account တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ပြီး log in လုပ်ရန် မလိုပါ။ ထို့အပြင် မြန်မာဝီကီထဲတွင် ၀င်ရေးရန် (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက်လည်း မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲ အချိန်မရွေး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ရေးနေကျ စာရေးသူအချို့ကလည်း log in မလုပ်ဘဲ ရေးနေကြသည်များ ရှိပါသည်။ သို့သော် Account တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ မြန်လည်းမြန်၊ လွယ်လည်းလွယ်ပြီး ညွှန်ကြားချက် အများကြီး မရှိပါ။
၁ Blocked အလုပ်ခံနေရပါသလား ?
၂ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
၂.၁ account ရှိသော user တစ်ယောက်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများ
၂.၂ အခြား အကျိုးကျေးဇူးများ
၃ အကျိုးကျေးဇူးအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များ
၃.၂ အမည်ထင်ပေါ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်
၃.၃ အသစ် ပြင်ဆင်ခြင်း options
၃.၄ user preferences များ
၄ See also
Blocked အလုပ်ခံနေရပါသလား ?
ကျောင်း သို့မဟုတ် ရုံးများတွင် Shared IP addresses များကို ဝေမျှ သုံးနေရသော နက်ဝပ်များနှင့် proxy servers များတွင် vandalism ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်သူ တချို့ကြောင့် အပြစ်မရှိသော သူများပါ ရောပြီး block အလုပ် ခံရတတ်ပါသည်။ သို့သော် မှတ်ပုံတင်ထားသော အပြစ်မရှိသည့် user တစ်ယောက် အနေနှင့် တကယ်ဖျက်ဆီးသော အပြုအမူများ လုပ်ခဲ့သည့် anonymous users များကိုသာ block ဖြစ်စေရန် request လုပ်၍ ရနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အနေနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး block ဖြစ်နေပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပေးချင်ပါသည်-
သင့် IP address ကို block လုပ်ထားသည့်ကာလ ကျော်လွန် (expires) သည်အထိ စောင့်ပြီး ထပ်မံ စမ်းကြည့်ပါ။ my contributions ကို သွားပါ။ ထိပ်တွင် ရှိသော Block log လင့်ခ် ကို နှိပ်ပြီး length of the block ကို ရှာပါ။
အိမ်တွင် account တစ်ခု လုပ်ပြီး ကျောင်း၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ခွင်တွင် log in လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ (မတူညီသော IP များတွင်) အပြန်အလှန် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
IP မတူသော အခြားနေရာတစ်ခုမှ ယုံကြည်ရသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သင့်အတွက် account တစ်ခု မှတ်ပုံတင် ခိုင်းပါ။ နောက်တစ်နည်းမှာ unblock mailing list at unblock-en-l@lists.wikimedia.org ကို အီးမေးလ် ပေးပို့ပြီး administrator ကို သင့်အတွက် account တစ်ခု အလုပ်ခိုင်းပါ။ ပထမဆုံး အကြိမ် ထို account ကို log in လုပ်ပြီးလျှင် password ကိုဂရုထား၍ ပြောင်းလဲပါ။
Wikimedia's secure server at https://secure.wikimedia.org/ ကို အသုံးပြုပါ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် သင့် အနေနှင့် network's proxy server ကို ကျော်လွှားပြီး မြန်မာ ဝီကီထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
account ရှိသော user တစ်ယောက်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများ
User page အပါအဝင် စာမျက်နှာအသစ် စတင်နိုင်ခြင်း။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း (ဤကဲ့သို့ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် သင့် account သည် အနည်းဆုံး မှတ်ပုံတင်ထားမှု ၄ ရက် ရှိပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ သို့သော် မှတ်ပုံ မတင်ထားသူများကကမူ ထို စာမျက်နှာများကို မပြင်ဆင် နိုင်ပါ။)
ပုံများ upload ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခြား ယူဆာ များနှင့် အီးမေးလ် အပြန်အလှန် ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ (optional)
သင့် account ကို personal preferences သတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။
သင့်တော်ပြီး အသုံးမပြုရသေးသော သင့်စိတ်ကြိုက် username ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
"My contributions" link မှတစ်ဆင့် သင်၏ ရေးခဲ့ တင်ခဲ့ပြီးသမျှ contributions အားလုံးကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
The use of your own to which you can add သင်စိတ်၀င်စားတဲ့ articles တွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် ပါဆင်နယ် watchlist ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မြန်မာဝီကီကို သင်မြင်ချင်သည့်အတိုင်း customize the appearance and behavior ပြုလုပ်ထား၍ ရနိုင်သည်။
Arbitration Committee elections နှင့် Wikimedia Board elections များ အတွက် မဲပေးခွင့်ရှိသည်။
သင့် IP address ကို တခြားသူများ မမြင်ရစေဘဲ ပြင်ဆင် တည်းဖြတ် နိုင်သည်။ (သင့် IP address ကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော Checkuser အက်ဒမင် အချို့ကမူ ရယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ထားမည်ဆိုလျှင် သင့်အနေဖြင့် အသုံးမပြုရသေးသော username တစ်ခုကို ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ logged in လုပ်ထားသောအချိန် ပြင်ဆင်သမျှကို ထို name ဖြင့် မှတ်သားထားမည် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်လုပ်ထားသမျှ contributions များအတွက် မှတ်တမ်းတွင် full credit ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ logged in မလုပ်ထားခဲ့သည်ရှိသော် ပြုပြင်ထားသမျှကို သင်၏ IP address နှင့်သာ မှတ်သားထားမည်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ထားသမျှ contributions အားလုံးကိုလည်း logged in လုပ်ထားသည့်အချိန်တွင် "My contributions" link ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အကြောင်းကို အနည်းငယ် ရေးသားနိုင်ရန် user page တစ်ခုကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ဝီကီသည် home page provider မဟုတ်သည့်အတွက် သင့်အနေဖြင့် free ဓါတ်ပုံအချို့၊ သင့် ဝါသနာ စသဖြင့် အနည်းငယ်သာ စုစည်း ရေးသားနိုင်ပါသည်။သို့သော် user အများစုကကမူ သူတို့ ဂုဏ်ယူသော ဆောင်းပါးများ စာရင်း၊ သို့မဟုတ် မြန်မာ ဝီကီ၏ အခြား အဖိုးတန် အချက်အလက်များကို စုစည်းထားလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြောဆိုရန် နေရာလေး ရှိသည့်အတွက် အခြား user များနှင့် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ပြောဆိုရန် နေရာမှာ စာရေးလာခဲ့လျှင်လည်း သင့်ကို သတိပေးမည်ဖြစ်သည််။ သင့် အနေဖြင့် အီးမေးလ် ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်လည်း အခြား user များမှ သင့်ကို အီးမေးလ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာကို အီးမေးလ်ပေးပို့လာသူက သိမည် မဟုတ်ချေ။
အမည်ထင်ပေါ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်
သင် ဘယ်သူလဲ ဆိုသည်ကို ထုတ်ဖေါ်ရန် မလိုပါ။ သို့သော် account တစ်ခု ရှိထားခြင်းအားဖြင့် မြန်မာဝီကီက သင့်ကို အခြားလူများ မှတ်မိအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ မြန်မာဝီကီတွင် အမည်မသိ ပြင်ဆင်ခွင့်မှုများ ပေးထားသည့်တိုင် ကောင်းမွန်သော ပြင်ဆင်ရေးသားမှုများကို log in လုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့မည်ဆိုပါက လေးစား ယုံကြည်လောက်မှုများ ဖြစ်တည်လာပေမည်။ နောက်တစ်ချက် အနေဖြင့် စာရေးသူ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြီး စုပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် တစ်ချိန်တွင် သင်သည် အများလေးစားရသော မြန်မာဝီကီပီဒီယားရေးသားသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာပေမည်။ ထိုအခါတွင် rollback ၊ sysop စသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိလာနိုင်ပေသည်။
တကယ်တွင် မြန်မာဝီကီသည် ပုံမှန် spammed ထည့်သူများ၊ စီးပွားရေး ကြော်ငြာသမားများ၊ ပေါက်ကရ ရေးသားသူများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ထိုသူတို့မှာ များသောအားဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိပါ။ နောက်တစ်ခုမှာ သတင်း အခြေအမြစ်များကို ဆန်းစစ်သည့်အခါ မြန်မာဝီကီ အနေနှင့် စိတ်ချရသော စာရေးသူများကို spammer များနှင့် ခွဲခြားနိုင်ရန် လိုပါသည်။
တကယ်တွင် သင့်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ထားခြင်းသည် အမည်မသိ အနေဖြင့် ရေးခြင်းထက် ပို၍ လုံခြုံကြောင်း သိစေချင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် သင့် IP address ကို ဖုံးကွယ်ထားလိုက် သကဲ့သို့ ရှိပေမည်။
တစ်ခုရှိသည်မှာ မြန်မာဝီကီ၏ ပေါ်လစီများသည် အချိန်နှင့် လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။
အသစ် ပြင်ဆင်ခြင်း options
မြန်မာဝီကီ အသုံးပြုနေတဲ့ MediaWiki software အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ users တွေသာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများအပြား ပါ၀င်ပါတယ်။ "minor" ဆိုတဲ့ ပြင်ဆင်မှု အသေးစား ပုံစံမျိုး ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လတ်တလော အပြောင်းအလဲ မှာ အသေးစား ပြင်ဆင်မှုတွေကို မမြင်ရအောင် စာရေးသူများက filter လုပ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမည်မသိ user အနေနဲ့ ဒီလို လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ အမည်မသိတဲ့ အတွက် IP Address တူတဲ့ user အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး။
မှတ်ပုံတင် user များ အနေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ စောင့်ကြည့်စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖတ်သမျှ စာမျက်နှာတိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်ပါ ဆိုတဲ့ လင့်ခ် အသစ်တစ်ခုကို အမြဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အဲဒီလင့်ကို နှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ စာမျက်နှာကို စောင့်ကြည့် စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ သင်အလုပ်လုပ်တဲ့၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို အသာအယာ စောင့်ကြည့် လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဝီကီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ user များသာ စာမျက်နှာ အသစ် ပြုလုပ်ခြင်း သို့ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ upload images ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လဲ log in ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
WikiProject User scripts ကပေးတဲ့ မြောက်များလှတဲ့ user scripts တွေကို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ user များမှ အသုံးချ နိုင်တဲ့ အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို မြင့်မားပြီး ထိထိရောက်ရောက် ရှာဖွေပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ ကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
user preferences များ
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် သင့်အနေနဲ့ MediaWiki ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံကို Preferences at special:preferences မှာ ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင့်အနေနဲ့ အောက်ပါ settings များကို ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ် -
skin: မြန်မာဝီကီ ရဲ့ ပြင်ပ အသွင်အပြင်ကို ပြောင်းလဲ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
math: သင်္ချာ အီကွေးရှင်းတွေ ဘယ်လို ပြသမယ်ဆိုတာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
files: image thumbnails တွေရဲ့ အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်မှုအတွက်လည်း အောက်ပါ preferences များ ပါရှိပါတယ်။
သင့်လက်မှတ် ကို ဘယ်လို ထိုးမလဲ
editing box အရွယ်အစား သတ်မှတ်ချက်
လတ်တလော အပြောင်းအလဲ စာမျက်နှာကို ဘယ်လို ပြသမလဲ
အခြား အချက်အလက်များ ....
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Why_create_an_account%3F&oldid=479443" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။